समयको सदुपयोग गर्न सरकार चुक्याे- कांग्रेस « risingsunkhabar
समयको सदुपयोग गर्न सरकार चुक्याे- कांग्रेस
प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०७८, शनिबार ११:३२
काठमाडौं । सरकारले समयको सदुपयोग गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार भिडियो वक्तव्य जारी गर्दै सरकार समयको सदुपयोग गर्न चुकेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘बितेको एक वर्ष हामीसँग समय थियो, हामीले के गरेर समय गुजार्‍याैं, सत्ताको दन्द्ध गरेर गुजार्‍याैं, मन्त्रीको संख्या थपेर गुजार्‍याैं, मन्त्रीको संख्या बढाउने भेन्टिलेरको संख्या नबढाउने, मन्त्रीको कुर्सी थपेर सरकार बचाउने तर जनताको जीवन बचाउन अस्पतालमा बेड नथप्ने ।’
बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजनको सिलिन्डर आदिमा सरकारको वास्तविक क्षमता कति हो भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयाे । ‘संक्रमणको विस्तार कुन हदसम्म हुन सक्दछ भन्ने विज्ञ अनुमान र विश्लेषण छ,त्यो हद सामना गर्न बेड लगायतको बिस्तारमा सरकारसंग बजेट, पुर्वाधार या इच्छाशक्ति के अभाव छ ? जवाफ चाहियाे’ – विश्वप्रकाशकाे भनाइ छ ।
संकटका बेला हरेक नागरिकको अभिभावक राज्य हुने भन्दै उहाँले बेडको अभाव हुन थाल्यो भने अभावको गीत गाएर त्यो अभिभावकत्व पूरा हुन नसक्ने बताउनुभयाे ।
उहाँले प्रश्न गर्नुभयाे – ‘निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा वृहत्तर सहकार्यमा कसरी गोलबन्द गर्ने? राजनैतिक दलहरू, संघसंस्था र समाजसँग सरकारले गरेको सहयोग अपेक्षा के हो? फ्रन्टलाइनमा रहेर कार्य गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्न सरकार कसरी प्रस्तुत हुने? खोपको पछिल्लो खेप आयातमा अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी कति तिब्रतर छ?’
यी समग्र बिषयमा सरकार प्रष्ट, पारदर्शी, योजनाबद्ध र दृढ ढंगले प्रस्तुत हुन जरुरी रहेको उहाँकाे भनाइ छ ।